သားကြီး ငါးကြီးလွတ် – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » သားကြီး ငါးကြီးလွတ် – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Dec 9, 2013 in Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 75 comments
ဘယ် စားဖိုမှူးမှ မအားတော့ ကွကိုယ် စဉ်းစားရပြီ။
အဲလာနဲ့ ဟိုတလောက ကတိပေးထားတဲ့တိုင်းးး
သားငါး များလွတ်ကြသော ရွှေမိုးတိမ်၊ နေခြည်နဲ့ ခေါင် (အဲ့ ခေါင်ရည်လည်း ဘယ်ရောက်နေတုန်း မသိ) တို့ အတွက် အသားလွတ်ငါးလွတ်ဟင်းများ အားပေးကြပါ။
MONDAY – သီးစုံ ချဉ်ရည်ဟင်း နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ငပိချက်။
ခရမ်းချဉ်သီးကို ရေနွေးဖျောအခွံနွှာပါ ပါးပါးလှီးထားပါ။ ကြက်သွန်အဖြူအနီကိုအရောင်တင်နဲ့ ဆီသပ်ပါ။ ညိုရောင်သန်းလာရင် ပုဇွန်ခြောက်ထည့်မွှေပါ။ လှီးထားတဲ့ခရမ်းချဉ်သီးများထည့် ရေနဲနဲထည့်ကြော်ပါ။ အရသာမှုန့်ငံပြာရည်ထည့်ကြော်ပြီး ရေခြောက်ဆီပြန်လာရင်တော့ ငြုပ်သီးစိမ်းအုပ်လိုက်တော့ အရသာရှိထမင်းမြိန်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ရပါတယ်။
သီးစုံဟင်းကတော့ ထည့်လိုတဲ့အသီးအနှံထည့်လို့ ရပါတယ် ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အာလူး၊ မုန်လာဥ ဗူးသီး ပဲသီး ရုံးပဒေသီး ထည့်ပါတယ်။ မကျည်းသီးမှည့်ကိုရေစိမ်ဖျောထားရပါမယ်.. ကြက်သွန် အဖြူ အနီ ကိုအရောင်တင်နဲ့ ဆီသပ်ပါ။ ညိုရောင်သန်းလာရင် ငပိထည့်ပါ ခရမ်းချဉ်သီးထည့်မွှေပါ၊ အကျက်ကြာမည့် အာလူး ဗူးသီး မုန်လာဥအရင်ထည့်၊ မကျည်းရည်ထည့်တည်ပါ အာလူးနူးရင် အပေါ့အငံမြည်းပါ။ ငံပြာရည် အရသာမှုန့် ထည့်ပါ။ ကျန်အသီးအရွက်များထည့် ဆူအောင်ပြန်တည်ပါ။ အသီးအရွက်များကျက်လို့ အရသာအနေတော်ရင်တော့ သီးစုံချဉ်ရည်ဟင်းရပါပြီ။
TUESDAY – ခရမ်းသီးလေးကိုအိုးကပ်နှပ်ပြီး အာလူး အစပ်အကြွပ်ကြော်စားရမယ်.
ထောပတ်ခရမ်းအသေးလေးတွေကို နှစ်ပိုင်းပိုင်း အလယ်ကခြမ်း၊ ကြက်သွန်အဖြူ အနီးကိုအရောင်တင်နဲ့ ဆီသပ် ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ထည့်၊ ခရမ်းသီးထည့်မွေ ရေလိုသလောက်ထည့် အဖုံးဖုံးချက်ပါ။ ရေခမ်းဆီပြန်ရင်တော့ ခရမ်းသီးအိုးကပ်ချက်ရပြီ။
အာလူးကိုအခွံနွှာ အချောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လှီး၊ လှီးပြီးသားတွေကိုဆားရေနဲ့ ထည့်ဆေးပါ။ ပြီးရင်ဇကာနဲ့ ရေစစ်ထားပါ .. ဆီပူပူ မှာ ထည့်ကြော်ပါ။ ကြော်ပြီးသားအာလူးကြော်တွေကိုဆီစစ်ထားပါ။ ဆီနဲနဲမှာ ကြက်သွန်ဖြူ နြ့ ငြုပ်သီးအကြမ်းဖတ်ထည့်ကြော်ပြီး မီးပိတ်ပါ ခုနကြော်ထားတဲ့အာလူးကြော်များထည့်မွှေလိုက်ပါ။
WEDNESDAY – နှမ်းဖတ်ချဉ်သုပ်ပြီး မျှစ်၊စားတော်ပဲကို ကြော်၊ ဘူးသီးကြော်လေးနဲ့
ဘူးသီးကတော့ သေးသေးတုန်းပြီး ရွှေလိပ်ပြာ အကြော်မှုန့်နဲ့ ဆားနည်းနည်းနဲ့ ကြော်ပြီး စား ရတာပဲ။
နှမ်းဖတ်ချဉ်သုပ်ကတော့ ကြက်သွန်ဖြူလေးကိုပါးပါးလှီး၊ ကြက်သွန်နီကိုလဲပါးပါးလှီးထည့်၊ ငြုပ်သီးစိမ်းလေးလှီး ရှောက်ရွက်ပါးပါးလှီး အရသာမှုန့်ဆားနဲနဲ မြေပဲဆီစိမ်းလေးနဲ့ နယ်လိုက်ရင် စားကောင်းတဲ့ နျမ်းဖတ်ချဉ်သုပ်ရပါတယ်။
မျှစ်ကြော်ဖို့က ကြက်သွန်အဖြူအနီကိုဆီသတ်ပြီးနွမ်းသွားလျှင်မျှစ်ကိုထဲ့ကြော်ပါ မျှစ်ကြော်ဆီပြန်လောက်ပါကပဲပြုတ်၊ဆားနှင့်ဟင်းခတ်မှုန့်တို့ကိုထဲ့ပြီးကြော်ပေးပါ ဆီကြွတ်ကြွတ်မြည်လျှင်အပေါ့အငံမြည်းကာမီးပိတ်နိူင်ပါပြီ။
ရေနွေးကြမ်းနဲ့စားနော်။ ဟင်း အရည်ချက်ရမှာပျင်းလို့။
THURSDAY – အာလူး၊ကြာဇံသုပ်နဲ့ မှိုကြော်
အာလူးပြုတ်၊ လှီးးး၊ ကြာဇံပြုတ် ပြီး စစ်ထားးး ပဲပုတ်မှုန့်၊ မြေပဲမှုန့်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ မန်ကျည်းမှည့်ရည် စတာတွေနဲ့ ချဉ်ငံစပ် သုပ်ပလိုက်။
မှိုကိုဆားရေလေးနဲ့ ဆေးပါ ရေစစ်ထားပါ။ ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူကိုဆီလေးနဲ့ ဆီသပ်ပါ။ ရေဆေးထားတဲ့မှိုထည့်ကြော်ပါ ။ အရသာမှုန့် ထည့်ပါ။ အိုးပေါ်ကမချခင် ခရုဆီလေးနဲနဲထည့်မွှေပေးပါ။
FRIDAY – ပြောင်းဖူး ကြော်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်
ပြောင်းဖူးစေ့နှင့်ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးး၊ ဆီပူပူမှာနနွင်းမှုန့်ကိုအရင်ထဲ့ပြီးကြက်သွန်နီကိုကြော်ပေးပြီးနွမ်းသွားမှပြောင်းဖူးစေ့ ဆားနှင့်ဟင်းချိုမှုန့်တို့ကိုတစ်ခါထဲထဲ့ကြော်ပေးပါ။ အားလုံရောမွှေပြီးနှစ်မိနစ်လောက်ကြော်ပေးပြီးအပေါ့အငံမြည်းကာမီးပိတ်နိူင်ပါပြီ။
ခရမ်းချဉ်သီးကတော့ အစိမ်းကို ဝယ်။ ပါးပါးလှီးးး မြေပဲလှော်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းပါးပါးလှီးး၊ ကြက်သွန်နီပါးပါးကို နည်းနည်းထည့် ဆီစိမ်းလေးရယ် ဆားလေးရယ်၊ သံပုရာသီးလေးရယ် သုပ်ပါလေ။
SATURDAY – ခွေးတောက်ရွက်နဲ့ ဘယာကြော်ရောကြော်ပြီး ပဲကြီးဟင်း အရည်သောက်လေး၊
ခွေးတောက်ရွက် အနုလေးတွေကို ကြက်သွန်နီအရင် ဆီသတ်ထားတဲ့ထဲ ထည့်ကြော်။ ရေခန်း ဆီနည်းနည်းပြန်လာရင် ခြေထားတဲ့ မတ်ပဲ ဘယာကြော်ကို ထည့် နှံ့အောင် မွှေပြီး ကြော်လိုက်ပါလေ။ အပေါ့အငံက ဆား ကို လိုတိုးပိုရှော့ပေါ့နော်။
တစ်ညသိပ်ရေစိမ်ပြီးအခွံချွတ်ထားသောပဲကြီးကိုဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း နနွင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းသုံးပုံတစ်ပုံနှင့်ရေအနည်းငယ်ထဲ့ပြီးအရင်ပြုတ်။ ရေခမ်းလာပါက နောက်ထပ် ရေမြုပ်အောင်ထဲ့ပြီးပဲနူးတဲ့ထိဆက်ပြုတ်။ ပဲများနူးလာပါကရေလိုသလောက်ထဲ့ပြီး ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း ဟင်းချိုမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက် ပါးပါးလှီးထားသောကြက်သွန်နီ တစ်ခြမ်းနှင့်ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်နှစ်ဇွန်းထဲ့ကာ ဟင်းရည်ဆူလာတဲ့ထိတည်ပေးပါတယ်…ကြက်သွန်နီများနူးလာပါကအပေ့ါအငံမြည်းကာ စားနိုင်ပါပြီ။
ခွေးတောက်ရွက်နဲ့မို့ ပဲကြီးမှ ဆူးပုတ်မခတ်တော့ပါ၊။
SUNDAY -နွားနို့ခဲ ဆီပြန်နဲ့ ဇရစ်ဖူးသုပ်၊ ပဲပင်ပေါက် ပဲပြားမုံညင်းကြော်။
နွားနို့ခဲလေးကို နည်းနည်းလေးညိုအောင် ကြော်လိုက်၊ ပြီးတော့ ဆယ်ထားးးး၊ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ ခရမ်းချဉ်သီးကို ဆီသတ်၊ လိတ်လာမှ နွားနို့ခဲထည့်ပြီး မကျေအောင်မွှေ အစပ်ကြိုက်ရင် အညာငြုပ်သီးစိမ်းတောင့်ပွလေး နည်းနည်းထည့်လိုက် စားရတာအရမ်းကောင်းတာ။
ဇရစ်ဖူးကို အရင့်များချိုးထားပါ။ ရေနွေးဆူဆူမှာမကျည်မှည့်ထည့်တည်ပါ။.. ပွတ်ပွတ်ဆူရင် ဇရစ်ဖူးများထည့် ခဏပြုတ်။ ကြာရင်ညိုသွားတတ်ပါတယ်..ပြုတ်ပြီးသားကို အနေတော်လှီးပါ .. မြေပဲထောင်း ပဲမှုန့်ဆီချက်တို့ နဲ့ အပေါ်ကကြက်သွန်ကြော်လေးအုပ်ပြီး စားလို့ရပါပြီ။
ပဲပင်ပေါက်ကိုရေဆေးပြီးစစ်ပေးထားပါတယ်။ မုန့်ညှင်းပင်လေးကိုလဲအနေတော်ပိုင်းဖြတ်ပြီးရေဆေးပြီးစစ်ပေးထားပါတယ်။ ပဲပြားနှင့်ကြက်သွန်နီကိုလဲလှီးပေးထားပါတယ်။ မီးအနေတော်နှင့်အပူပေးထားတဲ့ဆီပူပူမှာနနွင်းမှုန့်ကိုအရင်ထဲ့ပြီးကြက်သွန်နီကိုဆီသတ်ပေးပါ ပြီးလျှင်ပဲပြားကိုထဲ့ကြော်ပေးပါတယ်။ ပဲပြားကျက်ပါကမုန့်ညှင်း ဆားနှင့်ဟင်းချိုမှုန့်ကိုထဲ့ကြော်ပေးပါတယ်။ မုန်းညှင်းနွမ်းသွားလျှင်ပဲပင်ပေါက်ကိုထဲ့ကြော်ပါတယ်။ ပဲပင်ပေါက်နွမ်းပြီးအားလုံးသမသွားပါကအပေါ့အငံမြည်းပြီး စားနိုင်ပါပြီ။
သူများတော့ မသိဘူးးး ကျနော် အတော့ စဉ်းစားရကြပ်တာရယ်။ အသားကြိုက်သမားကိုးးးး :mrgreenn:
ဒါမဲ့ အပေါင်းအသင်းထဲ သားကြီးငါးကြီးရှောင်တဲ့သူ သတ်သတ်လွတ်စားတဲ့သူ အတော်များပါတယ်။
အပေါ်က ဟင်းစပ်တွေက နမူနာစပ်တာဖြစ်ပြီး ကျနော်ကို လာစပ်ခိုင်းရင်တော့ ဖော်မြူလာနဲ့စပ်မှာပါပဲ။
ဒီကြားထဲ ချက်နည်းတွေက ကွကိုယ် မသေချာလို့ ဟိုရှာဒီမေးလုပ်ရသေးးး
အနော့ ဖော်မြူလာ အကြောင်း စကြရအောင်ပါ၊
အရည်သောက် – အသီးအရွက်ကြော် – အသုပ် – အထောင်း – သနပ် – အကြွပ်ကြော်
သားကြီးငါးကြီးရှောင်တဲ့သူဟာ ငပိ/ငံပြာရည်၊ ပုစွန်ခြောက် စားလို့ ရပြီး
ဟင်းရည်ဟာ ပုစွန်ခြောက်လောက်မှ မပါရင် သောက်မကောင်းသလို ချဉ်ရည်ဟင်းဟာလည်း ငပိလေးမှ ပါပေါ့ရွှတ်သမို့ သတ်သတ်လွတ်ဟင်းတိုင်း ကျနော် အရည်သောက်ကို မစဉ်းစားပေးနိုင်ပါဘူးးး
ကြော်တတ်ရင် ကြော်တတ်သလို စားလို့ကောင်းတာမျိုးပါ။
ခရုဆီသုံးလို့မရတောင် ပဲငံပြာရည် အကြည်လေးနဲ့ချိုလေးအောင်လုပ်လို့ရသမို့ ဆားလေးပါ အားပြုပြီး ကြိုက်ရာကြော်ပါ။
အစိမ်းသုပ်သုပ်၊ အပြုတ်သုပ်သုပ် ချဉ်၊ငံ၊စပ်ဖြစ်ရင် စားကောင်းတာပါပဲ။
ငံပြာရည် အစား ဆားလေးပဲ သုံးရတာကိုးးး.။
ငပိ၊ ပုဇွန်ခြောက် ရှောင်စရာမလိုတဲ့သူတွေ အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
သနပ်၊ ကလယ်တယ်၊ ချဉ်ဖတ်
အလွယ်တကူဝယ်လို့ ရပြီး အိမ်မှာ လုပ်ရင်လည်း အပီသတ်သတ်လွတ်လို့ ရတာပေါ့။
ချဉ်ဖတ်ကို ပြန်သုပ်စားလည်း ရသေးတယ်။
ကေဇီမေးလို့ကတော့ ဘာမဆို ဆားနဲ့ နယ်ပြီး ကြော်ခိုင်းပလိုက်မှာ။ ဟေးဟေးဟေးးးး
ထပ်ကွန့်ချင်ရင် မုန့်နှစ်နဲ့ကြော်တာတို့ ကြော်ပြီးမှပြန်သုပ်တာတို့ပါ လုပ်လို့ ရသေးးးး
အဲတော့ ဒီ ခေါင်းစဉ်ခွဲထဲက အနည်းဆုံးးး ၃ မျိုးလောက် ပါရင်ကို သားသတ်လွတ် ဟင်း စားကောင်းပြီထင်ပါရဲ့။
သားဂျီး = ဒွေး
ငါးဂျီး = နံဒါလှိုင်
ခုတော့ နှစ်ယောက်စလုံး လွတ်သွားပြီ။ တယောက်က အသေလွတ် တယောက်က အရှင်လွတ်..။
ငါးဖွေး ဆက်ဖမ်းကြတာပေါ့ ကြောင်!
ခုနလေးတင်သတင်းတခုဖတ်တာမှာ.. လူသားရှင်သန်ဖို့.. ပိုးသတ်ဆေးတွေသုံး.. အသီးအရွက်တွေရှင်သန်ကြီးထွားအောင်လုပ်ကြတာမှာ.. ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ခေတ်မှီကမ်မစ်ကယ်..မြေသြဇာတွေကြောင့်… ကောင်းတဲ့ပိုးမွှားဗက်တီးရီးယားတွေပါသေကုန်တဲ့အတွက်.. လူသားရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့..အသက်ရှင်မှုထိခိုက်တဲ့အကြောင်းတဲ့…။
ပိုးသတ်ဆေးဆိုတာမျိုးမပေါ်ခင်က သီးနှံတွေ အောင်မြင်အောင် ဘယ်လို စိုက်ခဲ့ကြလဲမသိ။
ငယ်ငယ်တုံးက အိမ်ရှေ့ ဝေဇယန္တာ လမ်းမကြီးရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်း ခုပြသနာဖြစ်နေကြတဲ့
မိချောင်းကန် ၁ ၊၂ နေရာတွေမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ခင်းတွေရှိတယ်…
ပဲဖတ် နှမ်းဖတ်တွေ မြေကျင်းထဲ ဖျော်ထားပြီး ညနေဆိုလောင်းတာရယ်…
လေသင့်ရင် ပုတ်နံ့တော့ရတယ်…မုန်ညင်း၊ ကိုက်လန်၊ ဟင်းနုနွယ်၊ပန်းဂေါ်ဖီထုပ်တွေများ
၅၀ ၊ ၁၀၀ ဖိုးဝယ်ရင် အများကြီးရတာ..တစ်ခါတစ်လေဆို အလကားတောင်ပေးသေး..
နွေဆို ရှောက်သီးဆေးပြား လှမ်းတဲ့စင်တွေရှိတယ်…မွှေးနေတာဘဲ
ဟီဟိ သားသက်လွတ် စားကိုမစားဖူးဘူး…
ဟင်းတစ်မျိုး ထပ်ဖြည့်လိုက်လေ… ခရမ်းသီးမီးဖုတ်သုပ်…
ပြောမည့်သာပြောရ ရှေ့လဆို ချက်ကျွေးရမည့်သူ ရှိလာပြီ…ဟီး ဟီး
ချက်ကျွေးမည့်သူ လို့များမှားပြောမယ် မှတ်တာ….
ဟိုကချက်ကျွေးမဲ့သူလာမှာလား ချက်ကျွေးတာကိုစားမဲ့သူလာတာလား ရှင်းရှင်းပြောဘာ
ဂယ်ပြောတာပါ မွအိ နဲ့ မွသဲရယ်…
သူတပါး သမီးပျိုကိုယူပြီး ခိုင်းစားတယ် ဖြစ်မှာစိုးလို့…
ကျောက်စ်ပဲ အနစ်နာခံ ထမင်းချက်လုပ်ပါ့မယ်…
ရွာသူများ မနာလိုမဖြစ်ရ… ဟီ ဟိ
ဂွေးတောက်ရွက်နဲ့ ဘယာကြော်က အဆန်းပဲ… တဲ့ကောတဲ့ရဲ့လား….တော်ကြာ စားပီး တစ်ချိုးထဲ ထိုးအိပ်သွားရင်
ဘယာကြော် ဆိုတာ မတ်ပဲ ဘယာကြော်ကိုပြောတာနော်။
အိုး မန်းလေးမေမြို့ဖက်မယ် သတ်သတ်လွတ်ဆိုအဲဒါဟင်းတခွက်ပဲ စားကောင်းမှကောင်း သွေးကျဆေးက တော့ကွကိုယ်သောက်ပေါ့ကွယ်
ဒါဆို ကြော်စားကျိအူးမယ်.. အသဲလေးနဲ့ ချစ်ဆွိ…
မတ်ပဲဘယာကျော်က ကုလားအထမ်းဆိုင်းလေးတွေမှရောင်းတာထင်တယ် ဗမာသယ်တွေ ကျော်တာ သိပ်မတွေ့ဘူး…
အဲဒါ ကုလားပဲ ဗယာကြော်လေ။
မတ်ပဲ ဗယာကြော် ဆိုတာ ဗယာကြော် ကွင်းလေး။
B Donut လို့ခေါ်တယ်။
အောင်မယ်လေး မတ်ပဲဘရာကျော်နဲ့ကျော်ဒါဘာအေရယ်။ ကုလားပဲဘရာကျော်နဲ့ကျော်ရ တာဟုတ်ဘူးလေအေရယ်။
ဘယာကျော်ချင်းလွဲတာဆိုတော့ ခိုနဲ့ ဂျိုးလွဲတာလောက် မဆိုးသေးဘူး…
သတ်သတ်လွတ်တဲ့ ..ကွယ်…သေတောင်မစား …အဟိဟိ
လေယာဉ်မယ်နဲ့ ရရင် ဟိုက အဓိဌာန် အမြဲဝင်ပြီး အမြဲ သတ်သတ်လွတ်စားပါစေ။
စောရိုးကိုလည်း သတ်သတ်လွတ်ဟင်းနဲ့ပဲ ကျွေးပါစေ…
” လေယာဉ်မယ်နဲ့ ရရင် ဟိုက အဓိဌာန် အမြဲဝင်ပြီး အမြဲ သတ်သတ်လွတ်စားပါစေ။
စောရိုးကိုလည်း သတ်သတ်လွတ်ဟင်းနဲ့ပဲ ကျွေးပါစေ… ”
အဘ သိသလောက် ပြောရရင် ၊
အဓိဌာန် အားလုံးလောက် နီးနီးက ၊ သတ်သတ်လွတ် စားရုံ နှင့်တင် မပြီးသေးဘူးကွယ့် ။
အနဲဆုံး ၊ ၈ ပါး သီလ တို့ ၊ ၉ ပါး သီလ တို နှင့် တွဲပြီး ဆောက်တည်ရတာကွဲ့ ။ ဟီ ဟိ ။
အဲလိုသာ ဆိုရင် ၊ မေါင် စောရိုး လေးတော့ ငတ်ပြီ ။ ဟီ ဟိ ။
အဗျန်မ စရိယာ ဝေရမနိ …………….
သူတို့ RC ခွစ်ရှန်တွေရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုက ဥပုဒ်စောင့်တာတွေ..အဓိဌာန် တွေပါတယ်ဂျာ…ဘဖောပြောသလိုဆို ငတ်ရချည်ရဲ့ …အဟင့်ဟင့် ..ကျော်ကဘက်တစ်…ဘာမှသတ်သတ်မလွတ်ဘူး..တော်ယုံလူမစားတဲ့ .ဖား..မြွေ..ကြွက်..ပူး..ယုန်..ကြောင်…ပေါက်သင်ညို..ဆိုတာတွေတောင် ကချင်တွေ သည်းခြေကြိုက်…အဟိဟိ…
” သူတို့ RC ခွစ်ရှန်တွေရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုက …
ကျော်က ဘက်တစ် ”
ကိုရင် ဇောရိုး ကော ၊
အဲဒီ ရိုမန် တို့ ၊ ဘက်တစ် တို့ အကြောင်းလေးတွေ ၊
နဲနဲ ပါးပါး ပြောမပြချင်ဘူးလားဗျ ။
စာအုပ်တွေတော့ ဖတ်ဖူးပေမယ့် ၊
ကိုယ်တိုင် ခံစား / ယူဆ ချက်လေးတွေက ၊
ဗဟုသုတ ရယုံတင်မက ၊ အတွေးအမြင်တွေပါ ပွင့်လို့ပါ ။
မြန်မာပြည် မှာ ဘက်တစ် က ၊
ရှင် ယုဒဿန် ( US ) က စ မျိုးစေ့ချသွားတာ ထင်တယ် ။
မြန်မာ တိုင်းရင်းသား အများစု က ဘက်တစ် လားဗျ ။
ဘဖောရေ…ဒီလင့်တွေကတော့ ဒီလိုဆိုထားတာပါပဲဗျာ ..။ ဘဖော ..ကျော့်အမြင်ကို ဒီနေရာမှာတော့ ပြောရဲဘူးရယ် …အဟီး …
ကျော်ကလည်း ဘီလူးဝင်စားသဗျ… အသားမပါ အစားမမှတ်ဝူးရယ်..
ဒီ ထမင်းဆိုင်တော့ … မီးဒုတ်ရှို့ပယဇီဗျာ…
နာ ကိုယ်တိုင်လည်းမစားပါဘူးးး စားတဲ့သူတွေ အတွက် ချက်တာပါဆို။
တစ်ရက် ခြင်းစားရင် မဆိုးပေမယ့်…
အသုပ်ဆိုလည်း ပုစွန်ခြောက်လေးမပါ မချိုသလို စိတ်ဒဇ ပဲ မွအိရယ်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေဘဲ လာလည်မယ် ..
ကျန်တဲ့နေ့ ချက်တာတွေ ကျိုက်ဘူးး
ဒီ သကျိုးးးလေးက အတော်ချေးများတယ်။
” လူသားဘ၀ဖြစ်တည်မှုအတွက်… ရှင်သန်မှုအတွက်
မစားနိုင်သူတွေဟာ.. ပြိဿာ ဘ၀၀င်စားကြတာဖြစ်ပါကြောင်းရယ်… ”
သူကြီး ဘယ်လိုဘဲ ပြိဿာ ဖြစ်မယ် ပြောပြော ၊
အဘ ကတော့ သက်သတ်လွတ် အစားအစာတွေကို ကြိုက်တယ် ။
( တတ်နိုင်ဘူးရယ် ၊ သူ့အလိုလို နဂိုတည်းက ကြိုက်နေမိတာလေ )
သားစိမ်း ငါးစိမ်း ဆို အနံ့တောင် မခံနိုင်ဘူး ။
အရက် ဘီယာ ဆိုရင်လည်း ကြိုက်လို့ကို မရတာ ။
( ဟီ ဟိ ၊ ဟို အရင် ဘဝ က သူတော်ကောင်း ဖြစ်ခဲ့လို့ ဖြစ်မယ် ၊ နောက်ထှာ )
မစားချင်လို့ မစားပဲ နေတာ ဒုက္ခတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ။
ကျနော်တို့ စားတတ်ပြီး မစားနိုင်ရင်သာ ဒုက္ခဖြစ်နေရတာ အဘရေ။
ပြောတဲ့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကနေ.. ဘယ်ကဘယ်လို.. သက်သတ်လွတ်ဖက်ဆွဲခေါ်သွားသလည်းကွယ်…
အများစုတောင်ပိုင်း(ချစ်တီး)ဟိန္ဒူတွေသက်သတ်လွတ်က.. နို့.ဒိန်ခဲ..နို့ခဲ…စားသောက်လို့ရသမို့.. အဟာရပြည့်သဗျ…
ကော်ပီကက်ဟိန္ဒူ.. ဒေ၀ဒတ်ဂိုဏ်းသားတွေခမျာတော့.. ကျိန်စာကျသမို့.. နို့ထွက်ပစ္စည်းပါ.. မစားမသောက်မရသမို့.. ကလေးတွေမျိုးဆက်လိုက်… ဥာဏ်တုံးကုန်သဗျ…
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ဟင်းစပ်အကြိုက်ဆုံးပဲချွေးမွလေးရေ။ ချဉ်ရည်ဟင်းကတော့ ငပိငံပြာရည်မပါလဲချက်လို့ရ ပါတယ်ကွယ်။ ဟောဒီယောက်ခမွက ငပိငံပြာရည်မစားဘူး။ အဲဒါတွေမပါပဲ ချဉ်ပေါင်ရွက်ချဉ်ရည် ဟင်း တောင်ချက်စားပါတယ်ကွယ်။ ပုဇွန်ခြောက်ကလေးနဲ့ ဟင်းခတ်မှုန့် ( အသီးအရွက်ကထုပ်တဲ့ဟာနဲ့ ) ထညက်ကလေးတလုံးနှစ်လုံးနဲ့ချက်ပါတယ်ကွဲ့။ အထောင်းတွေလဲ ငပိမသုံးပဲပုဇွန်ခြောက်ကလေးပိုထည့် လိုက်သကွဲ့။
ယောက်ခမွ က ငပိစားဘူးကိုးးး
ဟုတ်တယ် အဲဒါဆို ပုစွန်ခြောက် ပိုထည့်ရတော့မပေါ့။
ဟောဒီကချွေးမွလေးကလေ ဘာသုတ်သုတ် ဘာထောင်းထောင်း ဘာချက်ချက် ငပိလေး ထည့်လိုက်ရမှ။
ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်၏။ မွ မွ <3
ပရင့်ထုတ်ပြီးကို သိမ်းထားမယ်။ ဒီပို့စ်ကြောင့် အနည်းဆုံး ဘာဟင်းစားချင်လဲမေးရင်တောင် မဖြေတတ်တဲ့ဘ၀ကတော့ ကျွတ်ပြီ..။ လက်တည့်စမ်းဖို့လွယ်သည်များကို စမ်းသပ်ချက်ကြည့်ပြီး ကျွိကျွိလေးကို မန်မန်စားဖိတ်ချင်ကြောင်းပါ..။
မချစ်သော်လည်းအောင့်ကာနမ်း… အဲလေ မကြိုက်လည်း သီးခံစားပေးပါနော်..။
ိဒို့ကတော့ ဥပါရင် (ကြက်ဥ ဘဲဥ) အနည်းဆုံး ၂ရက်လောက် အသားလွတ် ငါးလွတ်စားလို့ရတယ်။
မဟုတ်လဲ ဥကို ဒီတိုင်းကြော်စားလိုက်တာဘဲစ်။
အရွက်တွေတော့ကြိုက်ပါအိ သို့သော် အမြဲတမ်းတော့ …..မလွတ်နိုင်ဝူး
တို့ကတော့ အသားကို ဘယ် ဥ မှ ဘယ် အရွက်မှ အစားမထိုးနိုင်ဘူးပဲ။
သတ်သတ်လွတ် တစ်လစာ မီနူးတစ်ခု ဆွဲပြီးတင်ပေးဖူးသေးတယ် …
အသားငါးသိပ်မကြိုက်လို့ သတ်သတ်လွတ်စားလဲရတယ် … ဒါပေမယ့် ရက်ရှည်တော့ မစားနိုင်ဘူး …
ဖားအောက်တောရမှာကျွေးတဲ့ သတ်သတ်လွတ်ဟင်းလျှာတွေကတော့ အသားနဲ့သိပ်မခြားပါဘူး … ဟင်း ၅ မျိုးလောက် ဖော်မြူလာအတိုင်းချက်ကျွေးလို့ စားရတာ အဆင်ပြေတယ် ..
တလစာစဉ်းစားရရင် ခေါင်းခြောက်သွားမလားမသိ ဝေ၊.
အာလူးကိုပြုတ်၊အခွံနွာ၊ လက်နဲ့ချေ ၊ ကြက်သွန်နီအကွင်းလိုက်လှီး၊ ပင်နံငြပ်သီးလေးနဲနဲစင်း၊
ပဲဆီစစ်စစ်လေး နဲ့ ဆားလေးထည့်ပြီး သုပ်လိုက်ရင် အရသာရှိတဲ့ အာလူးသုပ်လေးစားလို့ရပါပြီ..
အဲလိုအစိမ်းမသုပ်ပဲ အာလူးချေထားတာကို ကြက်သွန်နီနဲ့ ဆီပူဒလိမ့်ထိုးစားလည်းတစ်မျိုးကောင်းတာပဲ…
အာ……..လူးးးးး လာမကျွေး နဲ့……………..
စိတ်ထဲ အာလူးလို့ ဆိုလိုက်ရင် ကြော်တာပဲ စဉ်းစားမိနေလို့..
ဒီထမင်းဆိုင်ကို ပက်ကညော မမြင်ဇီယ
အခုတလော အစားအသောက်အကြောင်း ကြားရ မြင်ရ ဖတ်ရရုံနဲ့
ဗိုက်က ဆာ ဆာလာတယ်။
အစားမျိုးစုံလည်း တွေ့ မရှောင် စားနေမိတယ်။
မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ကို စားချင်စိတ်တဖွားဖွားပေါ်နေမိတယ်။
ဘော်ဒီ ဝိတ်ကလည်း တစ်ပေါင်ပြီး တစ်ပေါင် တရိပ်ရိပ်တတ်လာ. .
အစားနဲ့က ဝ မှာ။
အဲတော့ စွံချင်ရင် လျှော့သောက်။
နေ့လည်စာက ငါး၊ပုစွန်ဒါတွေပဲ အသားနဲ့အသီးအရွက်ကရှားပါးရင့်ထော်နေ။
ညနေဘက် ထမင်းကြီးမစားချင်လို့ ရှမ်းခေါက်၊မြေအိုးမြီးရှည့်တောင့်တမိတယ် ကိုယ်တိုင်ဘာမှမလုပ်တတ်။
(ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ညနေက စတေးတပ်လုပ်ဦးမို့ပဲ ကိုယ့်ဒုက္ခသူများမမျှချင်တာနဲ့…)
ကံကောင်းထောက်မစွာ ခုနက ကျောင်းနောက်ဖေးအကြော်တဲက မုန့်ဆမ်းနဲ့ငှက်ပျောသီးတွေလာပေးသွားလို့
အန်တီက ရှေးဘ၀တုံးက အစားအသောက်ကောင်းပေ့ဆိုတာတွေ မလှူခဲ့ဘူးထင်ပါရဲ့၊အခုလည်း ကောင်းပေ့ဆိုတာတွေမကြိုက်ဘူး။
ဒါပေမယ့် စားရရင် အသားတွေထက်ပိုကြိုက်၊
တခါတုံးက သူငယ်ချင်းတွေစုမိတော့ အိမ်ရှင်သူငယ်ချင်းက Haciena Heights ဆိုတဲ့ တရုတ်ဘုံကျောင်းလိုက်ပြရင်း အဲဒီမှာ အမြဲကျွေးတဲ့ သက်သတ်လွတ်ဘူဖေးနဲ့ ဧည့်ခံတယ်။
ထိုင်ဝမ်ကလာတဲ့ အောင်ကျော်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းဖက်တီးခမျာ ရှုံ့မဲ့နေတာပဲ၊
အန်တီကတော့ မြေထောက်ပဲပြုတ်လေးစားလိုက်၊ဂေါ်ဖီခရမ်းရောင်(အဲတော့မှမြင်ဖူးတာ)ပါပါးလှီးထားတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်လေးတွေဝါးလိုက် သိပ်ကြိုက်တယ်၊သိပ်ကြိုက်တယ်ရွတ်လိုက်။
အိမ်ရှင်သူငယ်ချင်းကတောင် အားနာလို့ ဟန်ဆောင်စားပြတယ်ထင်နေသေး။
အိမ်မှာလည်း ဟင်းချက်ရင် ချဉ်ပေါင်ဟင်းကလွဲလို့ ငါးပိမထည့်ဘူး။ငံပြာရည်တော့သုံးတယ်။အချိုမှုန့် ရှောင်ပြီ။
စရှောင်ခါစ ပါးစပ်ထဲမထိပေမယ့် ကြာလာတော့ အချိုမှုန့်များတဲ့ စားသောက်ဆိုင်အစာတွေဆိုရင် စားလို့တောင်မရတော့ဘူး။
ငါးပိစားချင်ရင် ငါးပိထောင်းတော့ ထောင်းစားတယ်၊
ဟင်းထဲမှာ မလိုပဲ မထည့်တော့ဘူး။
ချိုစေချင် ဟင်းခတ် ပုဇွန်ပိုသုံးတယ်။
အာတီဒုံ။ မသိလိုက်လို့။ နောက်ခါဆို အာတီဒုံ တွက် ဟင်းစပ်ပေးမယ်။
ဒီမှာလည်း ခရမ်းရောင် ဂေါ်ဖီရှိတယ်။
အဲတော့ စားရက်တဲ့ အသားတွေပဲ စားရတယ်၊.၊ဟိဟိ။
ကျနော်တို့ အချိုမှုန့်မစားတာ မောင်လေး တစ်သက်။ ။
စားမိရင် အရမ်းသိသာတယ်၊ အသားတွေ စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ ထုံထုံကြီးဖြစ်လာတာ။
ပါးစပ်ကတော့ တကယ် အကျင့်ပါပဲ တီဒုံ။
ကျနော် က အငန်လျှော့ရမှာ၊
အစပ်နဲ့ အငန် အရမ်းကြိုက် အရမ်းစားဖြစ်လို့။
ဗျို့ထမင်းဆိုင်ကြီး… အဲ… ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီး…
နောက်တစ်ခါ တစ်ပတ်လုံး မြည်းပြီးသောက်လို့ရမယ့်ဟင်းနဲ့ အရက်တွဲ အစပ်လေးလုပ်ပေးပါ…
မြန်မာထမင်းဟင်းရိုးသွားပီ… တမျိုးပြောရရင် ကွန်ဆာဗေးတစ်ထမင်းဝိုင်းက ရိုးသွားပြီ…
အနော့ မှာ မိန်းမသားးးးးး
Humans are naturally plant-eaters တဲ့ဗျ… စားကြ …စားကြ…ကျော်တော့ အသားပဲစားမယ်..
ပုံ …Carnivore ဆောရိုး .အဟိဟိ
ခရမ်းချဉ်သီးသုတ်ရယ် ၊ နှမ်းဖတ်ချဉ်သုတ်ရယ် က လွဲရင် အကုန်ကြိုက်တယ် ။
ဒီပို့စ်ကို ၀င်ကြည့်တာ ဒီနေ့ဆို သုံးခါမြောက်ရှိပြီ ။ ကြည့်မိတိုင်း ဘိုက်ဆာတဲ့ ဒီလိုချိန်ဒွေချည်းပဲ ။ လော့အင် ၀င်မရလို့ မန့်လို့မရတာ … သားရေကျပြီး ပြန်ပြန်ထွက်သွားရတာပေ့ါညော် …
တကူးတက ဟင်းစပ်စဉ်းစားပေးတဲ့မမ ခိုင်ဇာ မွမွ နော်
သက်သတ်လွတ်စားတာ ဘာရယ် ညာရယ်ဟုတ်ပါဘူး ။ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် သားတွေငါးတွေ စားလာတာပါပဲ ။ စိတ်ကူးပေါက်လို့ သက်သတ်လွတ်စားတာ လပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ် ။
လူတစ်ကိုယ် စိတ်တစ်မျိုး ၊ လူတိုင်းကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ ကိုယ်ပေါ့လေ ။ အိမ်မှာ မိသားစု ငါးယောက်ရှိတာတောင် အကြိုက် က တစ်ယောက်တစ်မျိုးဝယ်နေရတာမို့လားး ။ ခေတ်ကိုက ဒီမိုကရေစီပါဆိုမှ အသားစားစား ၊ ငါးစားစား ၊ အရွက်ပဲစားစား အားလုံး ကိုယ့်ပါးစပ်ကနေ ကိုယ့်ဗိုက်ထဲ ကိုယ်ထည့်တာမို့ … ကိုယ့်သဘောအတိုင်းပေါ့ဂျာာာ
သားကြီး ငါးကြီးလဲ ပါဝူး ဆိုတော့
သတ်သတ်လွတ်ကာမှ မန့်သူရော ရှယ်သူရောများတာအေ။
နောက်အပတ် ဂယ်နားမှာလား ဟင်
သားကြီးငါးကြီးလွတ်ကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေး ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့လည်း.. စိတ်ကိုခြိုးခြံပြီး စားလိုက်အူးမယ်.. :loll:
သားကြီးငါးကြီးလွတ် ဆိုတော့ ဦးကြောင်ကိုများ စောင်းပြောလေရော့သလား ခြစ်စတယ်လေးရယ်။
​ရေးပြီးသား​လေးမှားဖျက်​လိုက်​မိလို့ အ​တော်​ဂွကျ ​နေပါ​ကြောင်း…
ဘာလို့နားမှာလဲချွေးမွလေးရဲ့။ အားပေးနေကြတာကို။ အမလဲတနင်္လာနေ့တိုင်းစောင့်ဖတ်နေရတာ။ ရင်တောင်ခုန်တယ်။ ဘာဟင်းအဆန်းလေးတွေများရမလဲလို့။ တင်ဘာအေရယ် :byee:
မကေ ( စားသောက်မှုဆိုင်ရာ ကွန်မန့် ဘုရင်မ )
နှမ်းဖတ်ချဉ်သုတ်နဲ့ ဇရစ်ကလွဲရင် အကုန်ကြိုက်တယ်.. ဟင်းစပ်တွေလဲ မှတ်ထားသိမ်းထားမယ်..
ခေါင်က..ငယ်ကတည်းက တခါတလေ ကြောင်တယ်..
နှမ်းဖတ်ချဉ်ဆို ငယ်ကတည်းက ဟင်…နွားစားတဲ့ဟာကို လူကသုတ်စားတယ်ဆိုပြိး မစားတော့တာ..
ဇရစ်ဟင်း အိမ်မှာချက်ရင် တပါတ်လောက် အိမ်ပြန်မလာဘူး အဘွားအိမ်မှာ သွားနေတာ..
ဟင်းခပ်တဲ့ ကြေးဇွန်းမှာ ဇရစ်နံ့ စွဲနေသလို စိတ်မှာ ဖြစ်နေတတ်တာ…။
ခွေးတောက်ရွက်နဲ့ ဘယာကြော် ခုမှ ကြားဘူးတာ..
ကင်းမုံသီးနဲ့ ဘယာကြော်အကွင်းနဲ့ ချက်စားကြည့်ပါလား ကောင်းမှကောင်း..
နောက်ပြီး စားတော်ပဲပြုတ်နဲ့ ဖလံတောင်ဝှေး ဒါးပြားရိုက်လေး ကြော်စားကြည့် ကောင်းတယ်..သိလား
နောက် ကိုကျောက်စ်ပြောတဲ့…ခရမ်းသီး မီးဖုတ်ကို ကြက်သွန်နီ ဆီစိမ်းလေးနဲ့ မြေပဲဆန် လေးစိတ်ကွဲ ထောင်းလေးနဲ့ သုပ်စားကြည့်…ကောင်းမှ ကောင်း..။
ကုက္ကိရွက်သုတ်တို့ညောင်ဖူးသုပ်တို့ ထနောင်းရွက်သုပ်တို့ လည်း ကောင်းတယ် မကေရဲ့။
ခေါင့် အတွက် ရေးပါတယ် ဆို မကြိုက်တဲ့ ဟင်းပါသွားလို့ ဆောရီးပါကွယ်။
ဟိ။အမှန်တော့ ကိုယ်ကြိုက်တာတွေ အရင်စပ်ပြီးမှ ရေးလို့ အဲလိုဖြစ်သွားတာ။
ကေဇီးရေ…( (Z) ကိုအမေရိကန်အသံထွက်ဇီးလို့ဖတ်..)
ဒီလအတွက် သတင်းစာမှာပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့ ဒီမီနှုးလေးရွေးလိုက်ပါတယ်။ အခုလိုစာပါတဲ့သတင်းစာလေးတွေပုံနှိပ်ပြီးတဲ့အခါ လက်ဝယ်လက်ရောက် ပို့ပေးဖို့လည်း စုထားပါတယ်/ပါမယ်..။
လျှော့ချင်တာ တည်းဖြတ်ချင်တာ အယ်ဒီတာ စိတ်ကြိုက်သာလုပ်။